कसरी एक dgn / dwg फाईलको आकार कम गर्ने - Geofumadas
जुलाई, 2010 अटोक्याड-Autodesk, Microstation-बेन्टले
यो हुन्छ कि यदि हामीसँग धेरै जानकारीको साथ फाईल छ, उदाहरणको लागि 70 सँग एक dgn तहहरू (स्तर) र एक निश्चित बिन्दुमा हामी यसलाई अर्को तहमा राख्न केही स्तरहरू हटाएर विभाजित गर्दछौं, मूल फाइल अझै समान आकार हो। हामी सबै डाटा पनि मेटाउन सक्छौं र यो उही रहन्छ, यद्यपि यो ईतिहास सक्रिय छैन।
यस अवस्थामा मसँग एउटा नक्सा छ जुन नगरपालिकाको सबै सूचना थियो, यसको मापन १ MB एमबी छ। मैले लगभग सबै चीज मेटाएको छु तर यसले अझै उही आकारको नाप गर्दछ।
त्यहाँ छन् जो गर्ने नयाँ फाईल खुला छ, नक्सा सन्दर्भ कल गर्नुहोस् र मार्फत यसलाई प्रतिलिपि गर्नुहोस् बार वा यसलाई निर्यात गर्नुहोस् बाड़ फाइल। यो विधिको हानि यो हो कि तपाईं हराउन सक्नुहुन्छ ऐतिहासिक यदि तपाइँ यसको प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने, तपाइँ चीजहरू पनि खोल्न सक्नुहुन्छ जुन फाइलमा कन्फिगर गरिएको थियो सेटिङहरू / डिजाइन फाइल.
त्यसो भए सर्वोत्तम तरीका यो एक शल्यक्रिया दिन को लागी हो, शब्द एक साथी मा केहि दोस्तों द्वारा संगत गरिएको थियो किनकी ओटोसीड मा यो प्रक्रिया भनिन्छ शुद्ध.
गर्नका लागि, यो सकियो फाइल / कम्प्रेस गर्नुहोस्। छनौटमा विकल्प यसलाई मेटाइएको छ, जो अप्रयुक्त स्तरहरू, रेखा शैलीहरू, पाठ शैलीहरू, ब्लकहरू (कक्षहरू), आदि समावेश गर्दछ।
एक पल्ट छान्नु भयो, यो लागू हुन्छ कम्प्रेस गर्नुहोस् र भोईला, मेरो 17MB फाईल मात्र 1MB मा तल गयो। उसले केहि भूत-जस्तो वस्तुहरू पनि मेटायो जुन नक्सामा देखिने छन् तर छुनु हुँदैन।
यो कन्फिगर गर्न सम्भव छ कार्यक्षेत्र / पूर्ववर्तीहरू, र विकल्प मा सञ्चालन, त्यसैले जब तपाईं माइक्रोस्स्टेसन छोड्नुहुन्छ, तपाइँ फाइल कम्प्रेस गर्नुहुन्छ।
फाईल> ड्राइंग युटिलिटीहरू> पर्ज गर्नुहोस्
यहाँ एक बोनस विकल्प छ, जसले चीजहरू सफा गर्न सकिदैन देखाउँदछ, र यसको कारण दिन्छ। तिनीहरूलाई चयन गर्न तपाईंले Ctrl कुञ्जी प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो माइक्रोस्टेशन भौगोलिक: फीचर पुस्तक
अर्को पोस्ट Geofumadas, फोटो मात्रअर्को »
एउटालाई जवाफ दिनुहोस् "कसरी dgn / dwg फाईलको आकार कम गर्ने"
2016 संस्करणमा यो कसरी हुन्छ?